केशरमणि कटुवाल बिहीबार, ३० फागुन २०७५
बहुचर्चित चुनवाङ बैठकमा ‘जित्नै पर्छ यो अन्तिम लडाइँ...’ बोलको गीत र ‘युद्ध मैदानबाट फर्किंदा’ शीर्षकको ओपेरा प्रस्तुत गरिरहँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा ‘बादल’, पोस्टबहादुर बोगटी, कृष्णबहादुर महरा, नन्दबहादुर पुन, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङलगायतका नेताहरू घुँक्क घुँक्क रुँदै आँसु झारिरहेका थिए । त्यही लाइनमा अग्नि सापकोटासँगै बसेका थिए– नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ । मोहन वैद्य, सीपी गजुरेललगायतका नेता भने भारतीय जेलमा थिए ।
जनवादी गणतन्त्रको यात्रालाई छाडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो समात्ने र संसदीय पार्टीहरू कांग्रेस, एमालेसहितका राजनीतिक दलसँग संवाद र सहमति हुँदै १२ बुँदे सहमति, १९ दिने जनआन्दोलनदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत् तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भयो ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को मागअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन भयो र माओवादी देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा सिंहदरबारभित्र पस्यो । माओवादी सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुग्यो, माथिल्लो स्तरका नेताहरूको जीवनशैली फेरियो तर चुनुवाङको ओपेरामा प्रस्तुत भएको युद्धको आर्तनादलाई वास्तविकतामा भोगेका कयौँ नेता कार्यकर्ता अझै शरीरमा गोली, बम र बारुद बोकेर बाँच्न विवश छन्, खाडीतिर पसिना बगाइरहेका छन् ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिलाई लिएर मतान्तर भयो । २०६९ सालमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी बन्यो । २०७१ सालमा विप्लवले नेकपा (माओवादी) गठन गरे, जुन पार्टी आज नेकपाका नाममा क्रियाशील छ । २०७२ सालमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल अस्तित्वमा आयो ।
२०७३ सालमा मोहन वैद्यको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रचण्डकै पार्टीमा मिसिन आए । जनयुद्धको नेतृत्व गरेको ठूलो हिस्सा एमालेमा गएको छ भने वैद्यले छुट्टै चुह्लो चलाइरहेका छन् । अब नेपालमा जनयुद्धमा सामेल भएको नेकपा (माओवादी) नामको पार्टी छैन ।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि छिन्नभिन्न भएका माओवादीमध्ये विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । रमाइलो कुरा त के छ भने यो प्रतिबन्ध लगाउने स्थानमा यिनै विप्लवलाई बन्दुक बोकाउने प्रचण्ड, बादलसहितका नेताहरू छन् र विप्लवका गतिविधि आपराधिक हुन् भनिरहेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ– विप्लवका गतिविधि आपराधिक हुन् भने २०५२ को पेरिफेरीबाट २०६२ को जनआन्दोलनसम्म उनीहरूले गरेका गतिविधिचाहिँ के हुन् त ? शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा गौरमा दुई दर्जन बढी माओवादी कार्यकर्ताको नृशंस हत्या क्रान्ति थियो कि अपराध थियो ?
केही वर्षअघि विप्लवले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– ‘नेताहरूले सही गरे भने जनताले सुख पाउलान्, त्यसले ठीक खालको जीवन पद्धतिको निर्माण पनि गर्ला तर नेताहरू हत्त न पत्त आफ्नो निजी जीवनतिर फर्किनुहुन्न र फर्किन पनि पाइन्न । जनता र कार्यकर्तालाई सडकमै छाडेर नेताहरूले वैभवको जीवन बिताउनेतिर जानुहुँदैन भन्ने हाम्रो सामान्य दर्शन हो । एउटा सुकुम्बासीले खान पाउनुपर्छ, एउटा युवाले शिक्षा र रोजगारी पाउनुपर्छ । हरेक नागरिकले स्वाभिमानीपूर्वक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ ।’
विप्लवका यी सोचाइहरू गलत हुन् ? के हिजो प्रचण्ड–बादलहरूले यही सपना देखाएका थिएनन् र ? यसबारे एक पटक ठन्डा दिमागले सोच्ने बेला भएको होइन र ? त्यस कारण विप्लवका पछिल्ला गतिविधि र तिनीहरूमाथि प्रतिबन्धको विषयले नेपालको माओवादी युद्धको वस्तुनिष्ठ समीक्षाको माग गर्छ ।
बाहिर देखिने समस्या
माओवादीले २०५२ सालदेखि सुरु गरेको युद्धका क्रममा देशको अधिकांश भूभागमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए । त्यतिबेला समानान्तर सरकारको रूपमा रहेको जनसरकारका प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराई शान्ति प्रक्रियापछि एक पटक र युद्धकै नेतृत्व गरेका प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर अझै कतिपय नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन्, सत्य निरूपण र मेलमिलापको काम भद्रगोल अवस्थामा नै छ ।
पहिले कुरा स्पष्ट थिएन तर शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात, यसपछिका हरेक परिघटना र माओवादी नेतृत्वमा देखिएका विचलनले उनीहरू आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा, आन्दोलन र यसको गन्तव्यप्रति नै प्रष्ट थिएनन् भन्ने देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक तथा सामावेसी जस्ता विषयलाई उपलब्धिका रूपमा लिइने गरिन्छ । तर यिनीहरूको प्रगतिशील चरित्रलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कम्युनिष्ट आदर्श र सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । यी केवल प्रचारका साधन बनेका छन् । जनताले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न पाएकै छैनन् । धनी र गरिबबीचको खाडल झनै गहिरो बनेको छ ।
युवाले दुई छाक खान र एकसरो लाउन, परिवारका सदस्यका नाङ्गो आङ ढाक्नका लागि विदेसिनुपर्ने र कतिपय त बाकसमा फर्किएर आउने अवस्था हाम्रा सामु छ । परिवार टुटेको छ, साथ छुटेको छ । अर्थतन्त्र अर्धमुर्छित अवस्थामा छ । तिनै युवा बेचिएर ल्याएको विप्रेषणले मुलुक धानिएको छ । महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीले जनता आक्रान्त बनिरहेकै छन् । यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हिजोको पञ्चायत र राजतन्त्रजति पनि प्रगतिशील चरित्रको देखिन सकेकै छैन ।
किन असफल भए माओवादी ?
उल्लेखित विषय नै माओवादी युद्ध उठानका कारक तत्त्वका रूपमा थिए । युद्धको रफ्तारमा अनेकन जटिल अवस्थाहरू आउने कुरा स्वाभाविक थियो । जनयुद्धका कार्यनीतिमा पटक पटक परिवर्तन हुन्छन् र गरिन्छन् । यसैगरी पछिल्लो चुनवाङ बैठकमा पनि तत्कालीन सुप्रिमो प्रचण्डले तत्काललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा लिने, त्यसलाई कार्यनीतिका रूपमा बुझ्ने, संसदवादीसँग मिलेर गणतन्त्र ल्याएपछि उनीहरू त्यसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा बदल्न खोज्छन् र आफूहरूले त्यतिबेलै विद्रोहमार्फत् जनवादी गणतन्त्रतर्फ अघि बढाउने कुरा ल्याए । बाहिरबाट हेर्दा कुरा बहुत सुन्दर पनि छ । पार्टीले युद्धमा ठूलो क्षति नभोगी शान्तिपूर्ण संक्रमण हुँदै अघि बढ्ने कुरामा धेरै सहमत भए ।
प्रधानमन्त्रीले विप्लव माओवादीका बारेमा सार्वजनिक मञ्चबाट दिएका अभिव्यक्ति गैरराजनीतिक चरित्रका उदांगो रूप हुन् । यसले शान्ति, स्थिरता र समृद्धि होइन, मुठभेड निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यो समस्याको जरासम्म पुगेर सच्याउनुपर्छ । विद्रोही शक्तिलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।
तर शान्ति प्रक्रिया प्रचण्डको कार्यनीति नभएर रणनीति भएको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै प्रचण्डको गन्तव्य भएको कुरा धेरै माओवादी कार्यकर्ताले पछि मात्रै बुझे । जतिबेला निकै ढिला भइसकेको थियो, हतियार थन्किएर खिया लागिसकेका थिए, जनमुक्ति सेना २०६८ चैत २८ गते नेपाली सेना नै लगाएर कब्जा गराइसकेपछि प्रचण्डलाई हाइसन्चो भयो । पार्टीलाई जुन बाटो ढल्काए पनि त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने शक्ति सकियो । युद्धको भयानक परिदृश्य सेलायो, जनयुद्धमा देखाएका ‘मुक्ति’का सपनाबाट ब्युझिँदा युद्धको ‘भूत’ मात्रै बाँकी रह्यो, वर्तमान शून्य बन्यो र सबैका अघि संसदीय व्यवस्थामा लतारिनु वा पुनः सातु, सरजाम जोड्नबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
पहिलो कुरा, यसबाट के भन्न सकिन्छ भने शान्ति प्रक्रियामा आउने एउटा बहाना मात्रै थियो, नेतृत्वले अन्तर्आत्मादेखि पहिल्यै आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो । शान्ति प्रक्रियाको ‘कभर’मार्फत सुरक्षित अवतरण भयो । सपना, योजना र विरासत छुट्यो । चुनवाङ बैठकका निर्णयलाई माओवादीको एउटा हिस्साले रणनीतिका रूपमा लियो र अर्को हिस्साले कार्यनीतिका रूपमा बुझ्यो ।
दोस्रो कुरा, नेपाल जस्तो देशमा क्रान्ति गर्ने भन्ने कुरा पनि ठट्टाको विषय थिएन र होइन । नेपालमा चीन र भारतका आफ्नै स्वार्थ छन् । त्योभन्दा परको शक्ति अमेरिकाले पनि नेपाललाई नियालिरहेको हामी पाउँछौँ । आफ्नो स्वार्थमा धक्का पुग्ने अवस्थामा यहाँ क्रान्तिलाई जुनसुकै रूपमा पनि असफल पार्न लागिहाल्छन् । नेपालमा लामो समयदेखि बाह्य शक्तिले खेल्नका लागि खुला ठाउँ पाउँदै आएका छन् । उनीहरूलाई खेल्नका लागि सहज रूपमा मैदान उपलब्ध गराउने कुरा आफैँमा सोच्नसम्म नसकिने कुरा हो ।
यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि वर्गीय मुद्दाको वकालत गर्दै आएको छ तर कम्युनिष्ट पार्टीमा रणनीतिक र व्यावहारिक रूपमा पोख्त र सिद्धान्तनिष्ठ नेताहरूको अभाव रहँदै आयो, भएकाहरूले शहर हुँदै सिंहदरबार छिरेपछि रङ बदल्न थाले । कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता दक्षिणपन्थी पार्टीका नेता कार्यकर्ता जस्तै ‘भुत्ते’ बन्न पुगे । आलोचनात्मक चेतना भएका र ‘फेस टु फेस’ वैधानिक रूपमा आन्तरिक र विरोधी शक्तिसँग लड्न सक्ने कार्यकर्ताको उत्पादन करिव करिव बन्ध्याकरण गरेको जस्तो अवस्थामा पुग्यो । कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता भनेका पनि उही चाकडी, चाप्लुसी, दलाली र नेताको पिछलग्गु बन्ने कुराले वैधता पायो । चेतनशील कार्यकर्ता पाखा लाग्दै गए, सिद्धान्तको ठीक विपरीत व्यवहार बन्न पुग्यो ।
शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने कुरा कुनै पार्टी र नेताको प्राथमिक विषय बन्न सकेन । सत्ताको लुछाचुँडी आमप्रवृत्ति बन्यो । शान्ति प्रक्रियाको निश्चित समयसम्म विद्रोही शक्तिको सहभागिताको सुनिश्चिततासहित राज्यका अंगहरूका समुचित व्यवस्थापन भएन । शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्दा ३० हजार बढी जनमुक्ति सेना देखाएकोमा प्रमाणीकरणपछि १९ हजार र समायोजनसम्म आउँदा करिब १२ सयको हाराहारीमा आइपुग्यो । यसले जनसेनाको ठूलो हिस्सालाई निरुत्साहित र हतोत्साहित बनाउने काम गर्‍यो ।
माओवादीले जुन व्यवस्थासहितको राज्यसत्ताको परिकल्पना गरेका थिए, त्यसबारे माओवादीभित्रै भ्रम रहेको कुरा अहिले आएर प्रष्ट भयो । वास्तवमा ‘जनवादी–जनवादी’ भनेर यतिका वर्षसम्म भनिएको राज्यसत्ता भनेको कस्तो हो ? यसको चरित्र कस्तो हुन्छ ? सामाजिक–आर्थिक अवस्था र त्यो व्यवस्था टिकाउन कसरी मिहिनेत गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन निकै कमजोर सावित भयो ।
सर्वहारा वर्गले राज्यसत्ता जित्नका लागि बुर्जुवा वर्गविरुद्ध धावा बोलेर मात्रै हुँदैन, माक्र्सले भनेजस्तै त्यो बुर्जुवा वर्ग समकालीन अवस्थामा बौद्धिक रूपले पनि माथि हुन्छ । त्यस कारण सर्वहारा वर्गले निरन्तर त्यो वर्गमाथि बौद्धिक रूपमा पनि श्रेष्ठता कायम गर्नुपर्छ । यसमा माओवादी चुक्यो र पुरानै शक्तिको वरिपरि चक्कर लगाउन थाल्यो ।
जनकलाकार माइला लामाले एउटा गीतमा भनेका छन्–
आफन्तजन गुमाएर टुक्रिएको मुटुसँग
घाइते जीवन डोहोर्‍याउँदै बाँच्ने सहयात्रीसँग
बदला र विजयको आत्मविश्वास जगाउँदै छु
तिनमा नयाँ जीवन भर्न क्रान्ति गीत गाउँदै छु ।
विप्लवले यसै भनिरहेका छन्– जुन प्रचण्ड नेतृत्वमा भएको ‘क्रान्ति’को परिणाम हो । यो अवस्थाको बीजारोपण पनि प्रचण्डले नै गरेका हुन् । त्यसैले प्रचण्डलाई यसबाट फर्किने अधिकार छैन । जहाँसम्म विप्लवका गतिविधि र उनको सैद्धान्तिक, वैचारिक पक्षको कुरा छ, त्यसमा पंक्तिकार पूर्ण रूपमा सहमत छैन । तर विप्लवको नेकपालाई आपराधिक पार्टीका रूपमा लिँदै प्रतिबन्ध लगाउने कुरा देशलाई पुनः द्वन्द्वमा फर्काउने मनसायबाट ग्रसित छ । प्रधानमन्त्रीले विप्लव माओवादीका बारेमा सार्वजनिक मञ्चबाट दिएका अभिव्यक्ति गैरराजनीतिक चरित्रका उदांगो रूप हुन् । यसले शान्ति, स्थिरता र समृद्धि होइन, मुठभेड निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यो समस्याको जरासम्म पुगेर सच्याउनुपर्छ । विद्रोही शक्तिलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।
सरकारको प्रतिबन्धको निर्णयले विप्लवलाई फाइदै पुगेको छ । करिब साढे छ वर्षअघि प्रचण्डबाट अलग भएर चार वर्षदेखि आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी चलाइरहेका विप्लवको पार्टीभित्र एक प्रकारको निराशा थियो । धेरैजसो हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीबाट धोखा पाएको भन्दै यो पार्टीमा लागेका थिए । राज्यले दमन गर्दा विद्रोही शक्तिमा एकता पैदा हुन्छ । यो कुरा प्रचण्डहरूले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । किनकि हिजो पनि पार्टीभित्र प्राविधिक अन्तरसंघर्ष बढ्न थाल्यो भने कुनै मोर्चा लड्ने तयारी सुरु गरिन्थ्यो । ती अन्तरसंघर्ष युद्धको मैदानमा हल हुन्थे । विप्लवको पार्टीमाथिको प्रतिबन्धले यस्तै सुविधा प्रदान गरेको छ । तर विप्लवलाई सरकारले सधैँ यही सुविधा उपलब्ध गराउँदैन । विप्लवको पार्टीको भावी दिशा उनी आफैँले तयार गर्नुपर्छ । देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, ३० फागुन २०७५
सडक सुरक्षाका लागि राज्य र नागरिकको दायित्व
समृद्धिको गति रोक्ने यो नियमावली कसको हितमा ल्याइयो सरकार ?
बजेटले आममानिसमा मुलुक समृद्ध हुने विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ
प्रिय वसु !
यी समस्या समाधानका लागि संसद् अवरुद्ध गर्नैपर्छ